Trangana lozam-pifamoivoizana : 168 no nahazo fahafahana vonjimaika -
AccueilSongandinaTrangana lozam-pifamoivoizana : 168 no nahazo fahafahana vonjimaika
Raha hoaharina ny tamin’ny taon-dasa dia efa azo lazaina ho nilamina ny fifamoivoizana teto an-drenivohitra satria dia efa maro ireo mpitandro ny filaminana manara-maso ny fizotran’izany andro aman’alina. Manoloana izany anefa dia fantatra fa noho ny fihoaram-pefy ataon’ny mpamily no tena matetika miteraka izany lozam-pofamoivoizana izany. Ohatra amin’izany ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo mpamily izay efa lalàna apetraky ny polisy eny amin’ny lalana eny mba hahafahana mizotra am-pilaminana tsy hisian’ny loza. Anisan’izany ny fifanenjehana ka lasa mahatonga ny fifandonana. Fantatra tamin’ny tatitra avy amin’ny polisim-pirenena fa 168 ny isan’ireo nahavanon-doza tamin’ny lozam-piarakodia nahazo fahafahana vonjmaika, raha 87 kosa ireo nidoboka am-ponja.
Maro ny lozam-pifamoivoizana niseho nanomboka ny fiandohan’ity taona 2017 ity, ary nahafatesana olona tamin’ireo, raha nisy ihany koa ny naratra maro an’isa vokatr’izany. Olona miisa enina araka izany no namoy ny ainy rehefa niharan’ny lozam-pifamoivoizana am-pandehanana an-tongotra, raha tafakatra 113 ireo olona naratra mafy vokatry ny firimorimon’ny fiara sy ny môtô. Ny mahagaga anefa manoloana izany tranga izany dia toa afa-maina toy ny tsy nahafaty olona akory ireo mpamily rehefa tonga eo anoloan’ny fitsarana. Satria raha ny tarehimarika voaray tamin’ireo lozam-pifamoivoizana nifanesy na tamin’ny môtô na koa ny taksibe dia ny naratra no betsaka tamin’izany.
Raha ny tombatombana manoloana ireo faty olona nandritry ny loza dia saika noho ny tsy fitandremana avokoa no nitera-doza tamin’izany ka nahafatesana olona, anisan’ny lasibatra matetika amin’izany ny mpandeha an-tongotra. Voalaza tamin’izany fa fahadisoana avy amin’ny mpamily foana no tena nahatonga izany. Misy amin’izany ny efa avy nandray zava-pisotro mahamamo ka tsy nahafehy ny hisatry ny fiara intsony, ka lasa mifatratra any amin’ny mpandeha izay tsy manan-tsiny. Anisan’izany ihany koa ny fiara izay efa fantatry mpamily mitondra azy fa misy tsy fahatomombanany nefa mbola iniany entina ihany. Manoloana ny rà nandriaka vokatry ny trangana lozam-pifamoivoizana avy amin’ny fiara mpitatitra sy ny sisa dia nampitaraina ny fianakavian’ireo manana havana maty nandritry ny loza ny fahafantarana fa nahazo fahafahana noho izany ny mpamily iray, rehefa avy atao famotorana eo anatrehan’ny fampanoavana ny raharaha, izay heverina ho tokony hahazo ny sazy henjana mihintsy. Etsy ankilan’izay dia toa lasa mahazatra ny fahenoana fa nahazo fahafahana indray izy ireo, na koa tsy misy tohiny intsony ny raharaha.
Handray fepetra amin’ny fampiakarana ny vidim-bary ny fanjakana, hamboarina ny kianja mitafo Soavita, hiverina amin’ny laonina 100 isan-jato ny famatsiana herinaratra amin’ny alarobia izao fara-fahatarany, notolorana fanomezana ny tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena sy ny toby miaramila ...Tohiny